Isinxibo seTshayina sabasetyhini esincinci esincinci esenziwe kunye neFektri | ISAPPARELS
Iingubo zamadoda ze-sublimation hoodie
Uhlobo: Iimpahla zamadoda ze-sublimation hoodie
Ukujonga ngokukhululekileyo okungaqhelekanga, lonke iqela liya kukhululeka kumnyhadala wakho olandelayo.Le sweatshirt yesiko le-crewneck inobunzima kwi-320g entle. Yenziwe ngesiqingatha somqhaphu kunye nesiqingatha se-polyester, azizukuncipha, azijwayele ukushwabana, ziyafumaneka ngemibala elishumi elinambini, ezihempe zezona zinto zilungileyo ezenzelwe umoya wakho wesikolo Ngenisa isikolo sakho samabanga aphantsi, isikolo esiphakathi, okanye i-mascot yamabanga aphakamileyo okanye wenze uyilo olonwabisayo olujikeleze igama lalo. Emva koko fumana ezi kubo bonke abantwana, ootitshala, kunye nabasebenzi. Xa usuku lomoya wesikolo lujikeleza, wonke umntu unento emnandi yokuyinxiba. Okanye uzenzele ezi zinto ngokucacileyo kwiqela elithile olixhasayo, njengeqela le-baseball, umkhondo kunye neqela lendawo, okanye ii-cheerleader.
Egqithileyo I-Crew Neck yesiqhelo yokuPrinta iiHoodies
Okulandelayo: Ifashoni yamadoda yokufihla hoodie
100% ipholiyesta ipholiyesta
Ihowuliseyili Sweatshirt Cotton ...
Ukunxiba okuqhelekileyo kwamadoda h ...
Iimpahla zamadoda ...
Ifashoni yamadoda ...